कतै तपाइले खाने चामल प्लास्टिकको त हैन ? यसरि छुट्याउनु हाेस्
एजेन्सी। आजभोली प्लाष्टिकको चामल आईरहेको कुरा हामीले जताततै सुनेका हुन्छौं। नक्कली चामलको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै नै हानिकारक छ। यसले प्रजनन प्रणलीमा बाधा पुर्याउनुका साथै पेटसम्बन्धि विभिन्न समस ... ....
कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ?
कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ ? ... ....
काठमाडौ । यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर ... ....
सुन्दर रहन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
एजेन्सी । सबैलाई सुन्दर हुन मन पर्छ । तर कतिपय अवस्थामा अनुहारमा देखापर्ने दागले अनुहारको सुन्दरता बिगार्छ। प्राकृतिक रूपमा यस्ता दाग हटाउन अपनाउनु पर्ने बिभिन्न उपायहरु यस्ता छन् । ... ....
यौन सम्पर्क पछि पुरुषले सोच्छन् यस्ता कुरा
एउटा सम्बन्ध जोगाउनको लागि जति एक अर्काबीच प्रेम जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ एक अर्कासँग नीजि पल विताउनु । त्यसमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि सामान्य नै मानिन्छ । जसले सम्बन्धमा थप मिठास ल्याउँछ । ... ....
महिलाले हृदयाघातको लक्षण थाहा नपाउने
५५ वर्षभन्दा कम उमेरमा महिलाले कहिलेकाही हृदयाघातको लक्षण थाहा नपाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, हृदयाघात भएर अस्पताल भर्नामा भएकामध्ये पुरुषकोभन्दा महिलाको मृत्यु हुने सम्भावना बढी भएको पन ... ....
अनुसन्धान : अगरबत्तीको धुँवा चुरोटको धुँवाभन्दा पनि खतरनाक
नेपालीहरुको घरमा सामान्यताः पूजाआजा गर्ने गरिन्छ । पूजा आरधना गर्दा धूप अनिवार्य बाल्ने प्रचलन छ । यसको सुगन्धले घरलाई शुद्ध बनाउँछ भन्ने परम्परा रहेको छ । हिन्दु धर्मालम्बीहरुमा विशेषतः धूप बालेर भगव ... ....